Home | Myanmar Academy - Online Education, Learning, Courses, Platform
လေ့လာမှုအတွက် ရက်သတ္တပတ်အကြား များစွာသော အခမဲ့သင်တန်းများကို ယခုပင် အခမဲ့ရယူပါ...
Type ACCEPTED to confirm our terms & condition i accept the terms and conditions
သင်၏ အရည်အချင်းများကို မြှင့်တင်ပါ၊ ဘဝကို တိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။ ကျပ် ၅၀၀၀ မှစတင်ပြီး သင်တန်းများကို သင်ယူလေ့လာနိုင်ပါသည်။
Zoho Books သည်သင်၏ငွေရေးကြေးရေးကိုစီမံသည်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသွားအလာများကိုအလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးသောအွန်လိုင်းစာရင်းကိုင်ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။
Last updater Sat, 20-Jun-2020
33 Lessons 05:48:06 Hours English
စီးဝင်သော ငွေများကို အလွယ်တကူ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း
ဖောက်သည်များနှင့် ငွေတောင်းခံလွှာများ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း
ဘဏ်အကောင့်များနှင့် အရောင်းအဝယ်များကို မှတ်တမ်းတင်ခြင်း
စီးပွားရေးလုပ်ငန်း အသွားအလာများကို အလိုအလျောက်ထိန်းညှိပေးးခြင်း
Zoho Creator ဖြင့် သင်၏စိတ်ကြိုက် အက်ပလီကေးရှင်းများကို တည်ဆောက်ခြင်း၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များ လေ့လာပါ။ သင်တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် သင်ခန်းစာရှာဖွေနေသည် ဖြစ်စေ၊ မြန်ဆန်စွာ မည်သို့မည်ပုံ ဗီဒီယိုကို သင်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
Last updater Thu, 18-Jun-2020
19 Lessons 03:46:01 Hours English
ဒစ်ဂျစ်တယ် အသွင်ပြောင်းမှုကို လမ်းညွှန်ရန် လက်တဆုပ်စာကိရိယာများ
မိုဘိုင်းဖုန်းသုံးပြီးသင်နှင့် သင်၏စီးပွားရေးကို ယူပါ။
အချက်အလက်သိုလှောင်မှုကို စဉ်းစားပါ - အလိုအလျောက် အက်ပလီကေးရှင်းများကို စဉ်းစားပါ။
အက်ပ်တစ်ခုမှ တစ်ခုသို့ ဒေတာစီးဆင်းမှုကို ခွင့်ပြုခြင်း
Illustrator CS5 အစအဆုံး လေ့လာခြင်း
Photoshop နှင့်အတူ Adobe Illustrator သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင် အရေးအပါဆုံး ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်းကိရိယာ တစ်ခုဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်အားနည်းနေသော ပုံမပေါ်သည့်အတိုင်းအဆမဲ့ အရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သော vector graphics ကိုဖန်တီးလိုပါက အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု တစ်ခုဖြစ်သည်။ Beginners ဗီဒီယိုသင်တန်း Ko TMTH ၏ Illustrator CS5 သည်သင် Illustrator ၏ရှေ့တန်းမှကိရိယာများနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို လျင်မြန်စွာကျွမ်းကျင်ရန် ကူညီနိုင်သည်။
Ks 30000 Ks 15000
Last updater Wed, 24-Jun-2020
67 Lessons 04:47:13 Hours English
Illustrator interface ၏အခြေခံများ၊ သင့်အားပရိုဂရမ်၏ အဓိကဒီဇိုင်းရေးဆွဲရေး ကိရိယာများသို့မသွားမီ သင့်အားအလုပ်နေရာများ၊ ဖြတ်လမ်းများနှင့် အရာဝတ္ထု alignment ကို အပြည့်အဝနားလည်မှုပေးသည်။
သင်၏ စီမံကိန်းများတွင် ပိုမိုရှုပ်ထွေးမှုများကို ထည့်သွင်းရန်အတွက် Geometric ပုံစံများ၊ ဖြည့်မှုများ၊
စာသားနှင့် မည်သို့အလုပ်လုပ်ရမည်၊ အရာဝတ္ထုများကို မည်သို့မည်ပုံပြောင်းလဲမည်၊ အလွှာများကို ကိုင်တွယ်ပုံ၊ brush နှင့် pen tools များကို မည်သို့မည်ပုံ အသုံးပြုမည်နည်းများ ပါဝင်သည်။
4 Lessons 00:08:45 Hours English
365 Daily Inspiration - FREE
Last updater Mon, 22-Jun-2020
1 Lessons 00:00:23 Hours English
Zoho Projects ဆိုသည်မှာ သင်၏အလုပ်ကိုစီစဉ်ရန်၊ ထိထိရောက်ရောက်ခြေရာခံရန်နှင့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသင်၏အဖွဲ့နှင့် အတူပူးပေါင်းရန် ကူညီပေးသော cloud-based project management tool ဖြစ်သည်။
8 Lessons 00:23:54 Hours English
Image Restoration (ပုံဟောင်းပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း)
Image Restoration ဆိုသည်မှာ ပျက်စီးခြစားမှု / ညစ်ပတ်နေသော ပုံရိပ်ကိုယူပြီး မူလပုံများကို ခန့်မှန်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ရုပ်ပုံပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ပုံရိပ်အားညံ့စေသော ချို့ယွင်းချက်များကို ပြန်လည်ပြုလုပ်ရန် သို့မဟုတ် "ပယ်ဖျက်ရန်" ဖြစ်သည်။ ယခုသင်ခန်းစာတွင် ရုပ်ပုံများကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန်၊ ရုပ်ပုံများကို သန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရန်၊ တည်းဖြတ်ရန် စသည်တို့အတွက် အသုံးပြုနိုင်သော အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများကို လေ့လာမည်ဖြစ်သည်။
Ks 15000 Ks 12000
Last updater Fri, 19-Jun-2020
15 Lessons 00:49:35 Hours English
ပုံများကိုတည်းဖြတ်ရန် Photoshop ကိုအသုံးပြုခြင်း
ပုံရိပ်ကို မြှင့်တင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်း
Zoho CRM သည်သင်၏ အွန်လိုင်းအရောင်းမြှင့်တင်ရေး၊ စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် စနစ်တစ်ခုကို တစ်ခုတည်း ထောက်ပံ့ရန်အတွက် online Customer Relationship Management (CRM) ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်သည်။
Last updater Sat, 27-Jun-2020
41 Lessons 09:22:08 Hours English
ဖောက်သည်များနှင့် ဆက်ဆံရေးကို သင်စိတ်ကြိုက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း
Zoho CRM ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။
အွန်လိုင်း ဈေးကွက် စီးပွားရေးစနစ် တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်း
သင်၏ထူးခြားသောစတိုင်လ်ကိုဖန်တီးပါ - သင်၏အကောင်းဆုံးအရောင်များ၊ ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ လိုင်းများ၊ နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
6 Lessons 00:11:10 Hours English
မိမိ၏ နေစဉ့်ဘဝကို ဖက်ရှင်ကျကျ ဝတ်စားဆင်ယာဉ်တတ်ရန်
အဝတ်အစားများကို အစိအစဉ်တစ်ကျ ထားရန်နှင့် ထိန်းသိမ်းတတ်ရန်
ဈေးဝယ်ထွက်လျှင် လိုက်ဖက်သော အဝတ်အစား၊ အရောင်များကို ရွေးတတ်ရန်
ခန္တာကိုယ် ဝဖြိုးလာလျှင် လိုက်ဖက်သော ဝတ်စားဆင်ယာဉ်မှု့ကို ရွေးချယ်တတ်ရန်
အချိန်၊ နေရာပေါ်မူတည်၍ ဝတ်ဆင်တတ်ရန်
အရပ်အမောင်း၊ အရွယ်အစားနှင့် လိုက်ဖက်သော ဖိနပ် ရွေးချယ်တတ်ရန်
Sayar Thu Rein Myint - Smokeless industry of Myanmar.
Last updater Sun, 06-Sep-2020
3 Lessons 00:19:53 Hours English
မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ ထူးခြားသော၊ ထင်ရှားသော နေရာဒေသများကို သိရှိကြစေဖို့
ဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ယောက်၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကို နားလည်ကြစေဖို့ ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ်
နိုင်ငံခြားဘာသာစကားကို ကျွမ်းကျင်အောင်လေ့လာပြီး ရပ်တည်ကြစေဖို့
English for Business Life (Elementary)
English for Business Life - Self-study interactive online learning program focuses on the language you really need in your business life. နေ့စဉ်ဘ၀ လုပ်ငန်းခွင်မှာ အင်္ဂလိပ်စကားကို အခြေခံမှစပြီးတတ်မြောက်လိုသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။
Ks 100000 Ks 10000
Last updater Mon, 31-Aug-2020
10 Lessons 01:58:57 Hours English
You will be able to talk about introducing yourself, your job, business activities, the location of your company, the layout of your company, meeting & welcoming, the first two minutes, partings and thanks and much more……
မိမိကိုယ်ကို ကောင်းမွန်စွာ မိတ်ဆက်တတ်စေရန်၊
Japan N5 Grammar - Basic
Last updater Sat, 05-Sep-2020
Ready for N4
mmdemy နှင့်သင်၏ ပန်းတိုင်များကို ပြီးအောင်ဆောင်ရွက်ပါ...
စီးပွားရေး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု၊ ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း၊ Python ပရိုဂမ်းမင်း စသည်နှင့်အတူ
အိုင်တီ၊ AI နှင့် Cloud အင်ဂျင်နီယာ ကဲ့သို့သော ဝယ်လိုအားမြင့်မားသည့် နယ်ပယ်များတွင် ဖြစ်သည်။
လက်မှတ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဒီဂရီရရှိမည်။
စီးပွားရေး၊ ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် အခြားအရာများအတွက် ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှ ဖြစ်သည်။
On-demand သင်တန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များနှင့်အတူ မြှင့်တင်ပါ။
mmdemy ၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် အက်ပ်ပေါ်မှ သင်တန်းများအား တစ်သက်တာရရှိ ခံစားနိုင်သည်။
ထိပ်တန်း စက်မှုလုပ်ငန်း ကျွမ်းကျင်စွာ သင်တန်းပို့ချသူများ ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်၏ စာကြည့်တိုက်ကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုနှင့် ကိုယ်ပိုင် တိုးတက်မှုအတွက် တည်ဆောက်ပါ။
mmdemy နည်းပြတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်ပါသလား?
မြန်မာတစ်ဝှမ်းမှ ထိပ်တန်းနည်းပြများက သန်းနှင့်ချီသော ကျောင်းသားများကို mmdemy တွင်သင်ကြားပေးသည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို သင်ကြားရန် ကျွန်ုပ်တို့က သင့်အား ကိရိယာများနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုများကို ပေးဝေပါသည်။
mmdemy.com တွင်ရရှိနိုင်သည့် အချက်အလက်များနှင့် ကိုယ်ပိုင် ပရိုဂရမ်မာများနှင့် ဒေတာဘေ့စ် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များကို လေ့လာသင်ယူနိုင်ပါသည်။
သင်၏အသင်းအဖွဲ့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားရန် လိုပါသလား?
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင်၏စီးပွားရေး၊ ကျောင်းနှင့် အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်၊ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာသည့် အဖွဲ့ ၀င်များပါ၀င်သည်။ ပိုမိုလေ့လာရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆက်သွယ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖောက်သည်များ ပြောဆိုတာက...
ကျွန်တော်ဟာ ဗဟုတုသ သုညဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။ mmdemy နဲ့အတူ ကျွန်တော်ဟာ အွန်လိုင်းမှာစပြီး သင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာ လုံလောက်တဲ့ ဗဟုသုတနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
စကေး၊ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုနှင့် ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ တည်ဆောက်ရန် မလိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုကို ရှာဖွေခဲ့သည်။ mmdemy သည် ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောအဖွဲ့အစည်းများမှ သင်ကြားပို့ချရုံသာမက သင်အလိုရှိသော ခြေရာခံခြင်းကို ပြုလုပ်ရန် သင်ကြားပေးသည်။
How mmdemy works?
Learn on mmdemy
Teach on mmdemy
How to buyacourse?
How to become an instructor?
Call us : 09-788989800
အရာအားလုံးကို ဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့် အချိန်မရွေးလေ့လာပါ...
- Myanmar Academy